BlackBerry manokatra laboratoara mizaka tena mahaleo tena any Canada | Vaovao IPhone
Tsy maty i BlackBerry fa nanao fety fotsiny, farafaharatsiny izany no toa ny vaovao farany izay nahatratra ny tontolon'ny geek. Toa nanokatra ivon-toeram-pikarohana vaovao tao an-drenivohitra Kanada ny orinasa amin'ny fikasana hidinika bebe kokoa amin'ny lohahevitra momba ny fiara mizaka tena.. Notazomina ny paikadin'i Tesla hampalaza ny rafi-pitaterana mizaka tena, lalina tokoa ka toa ny ho avin'ny fitaterana, mahatonga ny lalanantsika ho azo antoka kokoa ary hiteraka lozam-pifamoivoizana vitsy an'isa, farafaharatsiny noho ny hadisoan'ny olombelona.
Hatramin'ny 2010 dia toa mampiasa vola amin'ny familiana tsy miankina i BlackBerry. izany rehetra izany taorian'ny nahazoan'i QNX azy. Ity orinasa ity dia mamolavola rindrambaiko misy amin'ny fiara maro, indrindra ireo indostrialy, satria mifantoka amin'ny andian-tsambo io. Raha ny marina dia izy ireo no tompon'andraikitra amin'ny BlackBerry OS 10. Ity fampahalalana vaovao momba ny ivon-toeram-pikarohana napetrany tao Ottawa ity dia nahatratra ny foiben'ny Reuters noho izany dia afaka nihevitra azy io mihoatra ny tsaho fotsiny isika, raha ny tena izy.
Hampiasa fiara marika marika Lincoln ny orinasa hanandramana ireo fitaovana sy rindrambaiko mety hahatonga azy ireo mahaleo tena amin'ny fomba ivelany. BlackBerry dia iray amin'ireo orinasa telo nahazo alalana avy amin'ny governemanta kanadiana mba hitsapana ny fiarany mizaka tena amin'ny lalam-bahoaka.Mifanohitra amin'ny nataon'i Uber tato ho ato, tratra izy nanandramana fiara mahaleo tena teny amin'ny lalam-bahoaka nefa tsy nahazoana alalana, tamin'ny fotoana nitrangan'ny lozam-pifamoivoizana.
Google dia orinasa iray hafa izay nahazo tombony tamin'ity nodimandry avy amin'ny governemanta kanadiana ity sy dia mizaha toetra fiara mahaleo tena eny amin'ny araben'ny firenena Amerika Avaratra. Nanomboka ny fanisana ny familiana nentim-paharazana, fotoana fohy mialoha ny hipetrahan'izy ireo ny arabenay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » BlackBerry dia manokatra laboratoara mahaleo tena any Canada
Minecraft dia tonga amin'ny Apple TV lafo loatra ho an'ny foibe fampitam-baovao